Natiijooyinka ciyaaraha Horyaalada Yurub ee xalay - BBC News Somali
Natiijooyinka ciyaaraha Horyaalada Yurub ee xalay
Image caption Ciyaaryahano ka tirsan Manchester City
Waxaa xalay qaaradda Yurub laga dheelay qaar kamid ah ciyaaraha Horyaalada Yurub ee heerka group-yada.
Manchester City ayaa waxa ay soo bandhigtay ciyaar wanaagsan kaddib markii iyadoo marti ah ay 3-1 uga adkaatay kooxda Sevilla, halkaasi oo celcelis ahaan ay kooxda Manchester City ugu gudubtay wareegga 16-ka ee Koobka Horyaalada Yurub.
Image caption Wayne Rooney, kabkan kooxda Manchester United
Wayne Rooney, ayaa xalay ka fujiyay kooxdiisa oo 79-aad waxa uu dhaliyay goolka kaliya ee ay kooxdiisa kaga badisay kooxda CSKA Moscow, goolkaasi oo noqday goolkii ugu horreeyay ee uu ka dhaliyo koobka Horyaalada Yurub ee xagaagan.
Sidaana Rooney waxa uu kula sintay rikoorka gooldhalinta ciyariyahankii hore ee Manchester United ee Dennis Law ee u dhaliyay kooxdaasi 237 gool.
Rooney ayaa goolkaasi waxa uu u noqonayaa goolkisii 237-aad ee uu u dhaliyo Manchester United, wuxuuna haatan kaalinta labaad ee gool dhalinta ciyaaryahanada kooxda Manchester United lasoo galay Dennis Law oo isla kooxdaasi shayaadiinta cas-cas u dheeli jiray intii u dhaxeysay 1962-73.
Image caption Ciyaartii xalay dhexmartay Real Madrid iyo PSG
Dhanka kalana kooxda Real Madrid ayaa u gudubtay wareegga 16-ka ee Koobka Horyaalada Yurub kaddib markii ay guul dafiic ah oo 1-0 ah ka soo hoysay ciyaartii ay la yeelatay kooxda Paris St-Germain.
Ciyaaraha kalana kooxuhu waxay u kala adkaadeen sidatan:
Caawana kooxuhu waxay isku arki doonaan sidatan: